Baadhitaanka Suuq B2B: 9 Faa'iidooyinka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Kooxda ka tirsan Samatabixinta Ganacsi ee dhabta ah waxay ku bixinayeen xogtaan Sidee Ganacsiyada B2B ay ula tacaalayaan Baraha Bulshada muddo dhawr sano ah hadda oo dib loo cusbooneysiiyay 2015. Cilmi-baaristu waxay siineysaa xoogaa tirakoobyo guud ah oo ku saabsan korsashada suuq-geynta warbaahinta bulshada ee B2B waxayna tilmaamaysaa 9 faa iidooyin ay shirkadaha B2B arkeen:
Soo-gaadhis dheeraad ah
Samee taageerayaal daacad ah
Soo bandhig aragti suuqa
Hagaajinta darajooyinka raadinta
Kordhi iskaashiga ganacsiga
Yaree qarashyada suuq geynta
Ma helayo wax intaas ka sii cad. Weli waxaan aaminsanahay in shirkadaha B2B ay si weyn u dhayalsanayaan saameynta muddada-dheer ee suuqgeynta warbaahinta bulshada ay ku leedahay meelo badan. Runtii waan la yaabay taas xiriirka bulshada ma ahayn dheefo ku qoran - laakiin waxaa laga yaabaa in kordhinta shabakadaada bulshada ay hoos timaado soo-gaadhis iyo iskaashi ganacsi. Shaki kuma jiro in shirkadaha nala soo xiriiraya ay helayaan soo-gaadhis ka badan tan kuwa mar nala soo xidhiidha ee taga.
Waqtiga B2B badanaa waxaa loo daayaa rajada ama macaamilka, maahan wareegga iibka ama muddada ololaha suuqgeynta ee shirkadda. Natiija ahaan, waxay u baahan tahay in ganacsiyada si wax ku ool ah u koraan oo ay u ilaaliyaan awooddooda warbaahinta bulshada. Sii wad inaad bixiso qiimaha waxaadna dhisi doontaa xiriiro qiimo leh.
Tags: suuqgeynta b2bfaa'iidooyinka suuqgeynta b2bb2b faa'iidooyinka suuqgeynta warbaahinta bulshada
7 Istaraatijiyad Oo Wax Ka Beddelaysa Barnaamijyada Moobaylka
Febraayo 19, 2015 saacadu markay tahay 8: 54 AM
Xog wanaagsan oo ku saabsan warbaahinta bulshada.
Xilliga dhijitaalka ah, warbaahinta bulshada waa lagama maarmaan in loo isticmaalo socodsiinta meherado kasta oo ay ka mid yihiin ganacsiga qadka iyo ganacsiga qadka. Iyo in xiriir wanaagsan lala yeesho macaamiisha.